"Geometry Hondo 3: Zviyero" Zvino Zviripo | IPhone nhau
Maawa makumi mana nemasere apfuura isu takaburitsa chinyorwa nezve mutambo waifanira kusvika kuApp Store vhiki ino. Mutambo ndewe "Geometry Wars 3: Dimensions" yave kuwanikwa yekutenga uye zviri nani kwazvo kupfuura zvandaifungidzira. Chaizvoizvo, iwe ucharasikirwa nehurefu hwenguva pakati penzvimbo dzisingagone, mijenya yevavengi vakasiyana nematambudziko mumwe nemumwe akasiyana
Muchikamu chino ndiri kuzotsanangudza zvese zvinoitwa ne "Geometry Wars 3: Dimensions", sezvo paine akawanda akasiyana mutambo modes uye makanika kutsanangura. Ichokwadi kuti hazvina kuoma kudzidza, asi zvirinani kuziva zvakanyanya sezvinobvira nezve mutambo usati washandisa 4.99 € inokodzera zita iri.
Mu "Geometry Wars 3: Dimensions" isu tine, pamusoro pezvose, maviri mutambo modes (kunyangwe paine zvimwe): iyo classic uye ushingi, iri mhando yakaita yemushandirapamwe modhi mune mimwe mitambo. Tevere, ini ndinokuratidza iyi mitambo yemitambo, kutanga ne5 yeClassic Mode:
Mukati meiyo yakasarudzika modhi pane mashanu akasiyana mutambo modes mune iro dambudziko ndere kuwana zvibodzwa zvakanyanya, zvirinani. Ivo vakafanana neyemuchina weMartian michina, mupfungwa yekuti kana iwe ukafa (kungave kwenguva kana kwehupenyu) zvapera uye zvinokosheswa ndiwo mapoinzi. Mumutambo unotevera isu tichafanirwa kuzvivandudza isu kana kupokana neshamwari kuti tione kana achikwanisa kuve nani kutipfuura.
6.2 Super madhiraoni
6.2.2 Remote kuzvidzora
6.2.3 Nhema nhema
6.2.6 Smart pombi
7.1 Unganidza Geomes
7.2 Tarisa pane kusafa
7.3 Dzidza vavengi vako
8 Kukoshesa kwedu
Mune muganho modhi isu tichafanirwa kunongedza mapoinzi akawanda sezvatinogona kusvikira nguva yapera. Hatizove nemuganhu wehupenyu, asi isu tichafanirwa kuyedza kuti tisafe kuitira kuti simba remoto rirambe riripo, pamwe nekutambisa nguva mukuzvarwa patsva kwehunhu hwedu hunoshamisa.
Iyi mutambo modhi yakanyanya kuomarara. Izvo zvatinofanirwa kuita kupinda madenderedzwa uko, kana isu tiri mukati, vavengi vasingakwanise kutikuvadza uye isu tinogona kupfura, asi kunze kwavo, chombo chedu hachishande. Iwe unogona kufunga kuti zvese zvatinofanirwa kuita hakusi kusiya madenderedzwa, asi ivo vanonyangarika ...
Pano isu tichafanira kuwedzera akawanda mapoinzi sezvatinogona, semuganhuriro modhi, asi pachinzvimbo chekuganhurirwa nenguva, isu tinogumira ne3 hupenyu. Iwo ma mechanics akafanana neanogumira modhi, kunyange hazvo mamwe hupenyu achiwanikwa mune ino modhi. Ini handizive kuti sei chaizvo nekuti ini handina kutamba Yakashanduka yakawanda.Muvhidhiyo yemutambo uyu mutambo iwe unogona kuona bug inofunga ivo vanogona kugadzirisa, zvirinani pane iyo iPad. Bhatani rekuburitsa bhomba dzimwe nguva riri kure kwazvo nekwakananga chaiko, saka dzimwe nguva tinoda kuripurudzira uye hatirivhure.
Ini handizive kana iwe uchigona kuidana "pacifism" kubvisa vavengi. Mune ino modhi hatigone kupfura, chimwe chinhu chavakange vachida kuwedzera izwi rekuti "rugare" kune iyi modhi, asi isu tinogona kubvisa vavengi nekupfuura nemimwe mikova. Chatinofanira kuita kusasvikira kure zvakanyanya kubva kuvavengi nekuti, kana vachipfuura nemusuwo, vanoputika vachitora vateveri vedu kumberi. Tichava nehupenyu uye hatina muganhu wenguva.
Iyi modhi inonetsa, zvirinani kana tikasatamba kakawanda. Chatinofanira kuita, zvine musoro, kupona. Mafungu aya mapoka erudzi rwezvombo zvinokandwa pamwe chete pakati pazvo. Masaini anoenda nekudzoka kuyambuka danho, saka kana tikarasa chero ipi zvayo, ichave iri kutinetsa kudzamara tavaburitsa. Iko hakuna muganho wenguva uye isu tichava neupenyu humwe chete.
Asi, kubva pakuona kwangu, hapana chimwe chepamusoro chingafananidzwa nemamiriro ekushanya. Mune ino modhi isu ticha tamba tichipfuura nhanho. Sezvandambotaura kare, zvakafanana nemushandirapamwe mamiriro mune mimwe mitambo. Mu "Rwendo" tichaenda kubva kunzvimbo yakati sandara kuenda kune yakatenderera zvachose, pachave ne "mabosi" uye isu tinokwanisa kunatsiridza edu maDrones neSuper drones (makirasi edrone, mushure mevhidhiyo).
Iyo Attack drone idrone iyo, sekutaurwa kwezita rayo, icharwisa nekupfura panguva imwe chete nesu. Izvo zvakanaka kune dzimwe nguva nevazhinji vavengi kutenderedza, asi kwete padyo nesu.
Iyi Drone inovavarira kutibatsira kukanganwa maGeomes. Kana iyo drone ichivatora, tinogona kutarisa kubvisa vavengi.
Iyo inodzivirira uye yekurwisa drone panguva imwe chete. Icha gondisa vavengi kuti vagone kutibata. Haisi imwe yezvandinoda.
Zvakafanana neiyo Attack drone, asi ine yakareba yakareba kupfuura yekutanga. Ndinoifarira zvishoma uye ndiyo yandinowanzoshandisa.
Zvakafanana neiyo ramming drone, asi kushandisa pfuti pane "kumhanya pamusoro" pevavengi. Ini ndinoishandisa zvakanyanya, zvinoenderana nekuti iro danho riri nani kuzvidzivirira kana kurwisa neSniper.
Iyo Drone ichaisa zvimbambaira zvakatikomberedza. Kana vakatikona, ichagadzira nzvimbo yemugodhi iyo vavengi vasingazokwanisa kuyambuka. Asi, senge migodhi yese, painoputika, inonyangarika, saka isu tinofanirwa kugadzirira kutiza kwedu.
Chombo ichi chichavhura homing zvombo zvinokanganisa chinangwa. Ini ndinoifarira nekuti inotitevera kwese kwatinoenda uye, panguva imwechete, inotidzivirira.
Chombo ichi chichapinza vavengi munzvimbo yatinoisiya. Vavengi vachaenda kwaari, izvo zvinotibatsira kuti titize kutanga titore pfuti iri nyore gare gare. Geomas ichaonekwa kana yapera.
Tinogona kuisiya panzvimbo imwe uye ichapfura vavengi vese painenge ichishanda. Semumitambo yese, mabhureki ane simba kwazvo.
Seizvo zita rinoratidzira, "mukoma mapatya" achaonekwa kutibatsira muhondo yedu. Iwe unofanirwa kutamba yakawanda kuti uwane uye ini handina kuzviita, asi zvichave zvakakosha.
Haisi super drone, asi iri nani kupfuura iwo ese. Inobhadharisa zvirinani zvese zviri padyo uye kwete padyo zvakanyanya.
Izvo zvichave zvakakosha mune angangoita ese emamodhi modhi kuti usakanganwe matombo ehuswa ayo vavengi vari kuburitsa pavanonyangarika. Aya mabwe kana maGeomes anowanda uye nemari yemutambo. Kana tine X Geomas tinogona kuwedzera simba remadrones edu uye makuru madroni. Semunhu anowedzera, zvichatibvumidza kukwidza zvibodzwa nekukurumidza, chimwe chinhu chakanyanya kukosha kunyanya mune yemafaro nzira.
Tarisa pane kusafa
Zvichaita senge truism, asi zvakanyanya kukosha kutarisa kune yekufambisa analog kupfuura iyo moto analog. Kana tikatarisa kupfura, chero nguva muvengi anotishamisa uye akatiuraya.
Dzidza vavengi vako
Iri izano kubva kumutambo mumwe chete. Isu tinofanirwa kudzidza vavengi uye kuvarwisa zvinoenderana nematera avo asina kusimba ... kana vainavo. Semuenzaniso, iwe unofanirwa kuve nerukudzo rukuru kune vakasvibira vavengi, nekuti ivo vanomhanyisa kwazvo, vasingatarisirwe uye vanowanzoenda mumapoka ane njodzi. Nekudaro, iwo ebhuruu akafanana nembwanana 😉
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » "Geometry Hondo 3: Makimo" izvozvi zvave kuwanikwa paApp Store. Ongorora.
Pablo, mumaonero ako zvakakosha izvo zvinodhura?
Masikati akanaka, David. Mune maonero angu, hongu. Pamusoro pePadad, ini handina kumbotamba chero chinhu chakakosha seichi. Iyo ine "chete" makumi mashanu mazinga mu adventure nzira, asi kutora nyeredzi dzese kunogona kuve kunonetsa. Ndanga ndichitamba kwenguva yakareba uye mumatanho mashoma ndine ese matatu.
Zvakanaka, ndichazviratidza pasina kukundikana
Ichamhanya zvakanaka pane ipad 2? : S
Icho chiitiko chichava chakadzikira zvakanyanya pane iyo iPhone 6?
Ndicho chega chinhu chinondinonotsa
Husiku hwakanaka, Rodrigo. Kwayedzwa pane iyo iPad 4 (iyo ine mavhidhiyo), iyo iPhone 6 Plus, iPhone 5s uye zvese zvakakwana. Pane iyo iPad 2 inopa zvidiki zvidiki (ini ndangotamba chete maviri ekutanga matanho).
Ini ndangozviedza uye ndinofanira kuti handina kufarira mutambo kubva kuMonument Valley zvakanyanya, zvakakurudzirwa
Iwo ekutanga zvishongedzo zveKeKeKit anogona kusvika svondo rinouya